Nanandrana niditra tao amin'ny sekta i Emma Watson
Ny tantara momba ny raharaha manala baraka ny sekta NXIVM sy ny tampony, izay niatrika ny fanondranana vehivavy an-tsokosoko, dia mbola mihamafy hatrany. Toa nanjary lasa andevozin'ny devoly ratsy i Emma Watson.
Ny fandrika diso
Tamin'ny herinandro lasa teo, taorian'ny fisamborana tamin'ny volana marsa nataon'ny mpanorina ny vondrom-piarahamonin'ny Nexiam, izay nahaliana ny FBI ny asany heloka bevava, i Kean Ranier sy ny fijoroany ho vavolombelona dia nogadrain'i Allison Mack, izay fantatry ny mpanatrika tao amin'ny fahitalavitra "Smallville's Secrets".
Talohan'izao ny fanadihadiana dia nahatsikaritra fa ilay mpilalao sarimihetsika dia ny tànany ankavanana an'i Ranier. Nandrisika ny vehivavy hanatevin-daharana ny fikambanana JNess izay mifandraika amin'ny NXIVM izy, izay mampanantena azy ireo ho fampiroboroboana lamaody toy izao, izay nampiasaina tamin'ny atidoha, avy eo notifirina, nampiasa ny asa fanandevozan'ny tra-doza ary nanery azy ireo hiditra anaty fifandraisana akaiky.
Mpikambana ao amin'ny fivarotana
Andro vitsy lasa izay, nitatitra ny haino aman-jery tandrefana fa niezaka i Ellison hampiantrano an'i Emmy Watson sy i Kelly Clarkson ao amin'ny sekta fantatra amin'ny fiheverany ny vehivavy. Mack, zazalahy 35 taona, matory ara-bakiteny i Watson, 28 taona, ary Clarkson, 36 taona, dia niresaka momba ny "hetsika mahavariana vehivavy".
Noho izany, tamin'ny 2016, Ellison ao amin'ny Twitter dia nanoratra hafatra ho an'ilay mpandray anjara amin'ny andraikitr'i Hermione Granger:
"Mihevitra aho fa afaka miara-miasa. Ampahafantaro ahy raha te hiresaka ianao. "
Soa ihany fa nahatsapa fangirifiriana i Watson na sahirana be tamin'ny asa ary tsy namaly ny iray tamin'ireo bitsika amin'ny mpiara-miasa taminy.
Manalavitra ny zava-misy amin'ny fananganana indray an'i Nexiam sy i Kelly Clarkson. Ilay mpihira dia nandray ny hafatra mitovy amin'ny fiderana sy ny tolotra mba hiresahana am-po amin'ny fo.
Ilay mpilalao sarimihetsika Ellison Mack dia voampanga ho nanangona vehivavy ho amin'ny fanandevozana ara-nofo sy ny asa
Ny Alatsinainy, Samia Shoab, izay nanonona ny fahatsiarovana fahaenina sy Requiem ho an'ny nofy, dia nanambara fa Mack dia mazoto manandrana mandresy lahatra azy ho tonga ao anatin'ny NXIVM, niantso azy hoe "vehivavy tsara tarehy." Fantatra fa ny Shoab, izay mijery tsara tarehy, nandritra ny 47 taona, dia tsy ela dia nahaliana azy ny mpaka sary an-keriny, mikatsaka ny andevo tanora kokoa.
Amal Clooney dia niarahaba ny vadin'i George tamin'ny andro nahaterahany
Ny biography of Leonardo DiCaprio
Nicole Kidman amin'ny "Emmy": Fandresena amin'ny fanendrena ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra, manoroka miaraka amin'ny mpiara-miasa sy kiraro hafa
Kara Delevin namitaka an'i Dakota Johnson
Prince William mandika ny fandraràna ny gastronomy ny vadiny
Mariakarla Boscono sy Bella Hadid dia nanolotra fanangonana vaovao amin'ny akanjo fitondra-tena Givenchy
Emily Ratjakovski mampiseho loko marevaka malaza
Ny elanelana eo amin'ny vavony
Orieng ho an'ny saka - fanehoana an-tsipiriany momba ny isa
Hair clippers - ahoana no safidy?
Myanmar - Fitaterana
Mpilalao baolina lavalava ve dia lasa pelaka?
Nahoana ny rantsantanana no mihodinkodina?
Fanatanjahana eo amin'ny fitball ho an'ny zazakely
Ny endrika tsy hita amin'ny "Brangelins" dia mivarotra amin'ny Ebay